Nxibelelana - gomymobi.com
gomymobi.com Dibana no
Buza nantoni na. Siza kuphendula kungekudala
ukuqonda izisombululo zethu ngokukhawuleza
Nangona sikholelwa ukuba kufanelekile kuvavanyo olulungileyo ekusebenziseni ezona zisombululo zethu zilungileyo, kodwa ngamanye amaxesha ukuba awukwazi ukuqonda nantoni na, nceda ukhumbule sihlala silapha ukukunceda.
Ngokuphumelelayo !!! Siza kuzama ukuphendula i-imeyile yakho ngokukhawuleza.
Impazamo ??? Nceda uzame kwakhona okanye usithumelele i-imeyile ngqo
Nceda uthumele kwakhona ukuba awufumani mpendulo yethu kwisithuba seeyure ezingama-24 okanye uthumele ngqo ku